ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ရော ကလေးပါ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ် - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ရော ကလေးပါ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ရော ကလေးပါ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်
Apann Pyay 10:18 AM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
KBZ ဘဏ် မဂ်လာ​ဈေး ဘဏ် ခွဲက လက်​​ထောက်​ကြီးကြပ်​​ရေးမှူးလို့ သိရှိရပါတယ်​….
​မွေးဖွားရန်​ ၂ရက်​အလိုရက်​​စေ့လ​စေ့ကြီးနဲ့ ရေချိူးခန်းထဲ ​ချော်​လဲပြီး သတိ​မေ့သွားရာမှ သတိပြန်​မလည်​လာပဲ ​သေဆုံးသွားတဲ့ ဖြစ်​ရပ်​ ဖြစ်​ပွားခဲ့တယ်​လို့ ​သေဆုံးသူရဲ့ ​ကျောင်း​နေဖက်​သူငယ်​ချင်​၏ FB accမှသိရှိရပါတယ်​….
​​​က​လေး​လေးလဲ အပြင်​​လောက​တောင်​မမြင်​ရရှာပဲ..မိခင်​နဲ့အတူ သဂြ်ုလ်​ခံလိုက်​ရပြီ…
​နောင်​ဘဝ အဆတ်​ဆတ်​ ဒီလ်ိုအဖြစ်​ဆိုးမှ ကင်း​ဝေးနိုင်​ပါ​စေ…
ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​သည်​​တွေလဲ မိုးတွင်းမို့ ဂရုစိုက်​ကြပါ​နော်​..
KBZ ဘဏျ မဂျလာ​စြေး ဘဏျ ခှဲက လကျ​​ထောကျ​ကွီးကွပျ​​ရေးမှူးလို့ သိရှိရပါတယျ​….
​မှေးဖှားရနျ​ ၂ရကျ​အလိုရကျ​​စလေ့​စကွေီ့းနဲ့ ရခြေိူးခနျးထဲ ​ခြျော​လဲပွီး သတိ​မသှေ့ားရာမှ သတိပွနျ​မလညျ​လာပဲ ​သဆေုံးသှားတဲ့ ဖွဈ​ရပျ​ ဖွဈ​ပှားခဲ့တယျ​လို့ ​သဆေုံးသူရဲ့ ​ကြောငျး​နဖေကျ​သူငယျ​ခငျြ​၏ FB accမှသိရှိရပါတယျ​….
​​​က​လေး​လေးလဲ အပွငျ​​လောက​တောငျ​မမွငျ​ရရှာပဲ..မိခငျ​နဲ့အတူ သဂျွုလျ​ခံလိုကျ​ရပွီ…
​နောငျ​ဘဝ အဆတျ​ဆတျ​ ဒီလျိုအဖွဈ​ဆိုးမှ ကငျး​ဝေးနိုငျ​ပါ​စေ…
ကိုယျ​ဝနျ​​ဆောငျ​သညျ​​တှလေဲ မိုးတှငျးမို့ ဂရုစိုကျ​ကွပါ​နျော​..